Hotmail Login 🤑 Sign into Hotmail Account & Izithombe
Ingabe ufuna isiqondiso efanele Hotmail Ngemvume? Dlula lesi sihloko engilithumele wadala ukukunikeza ulwazi efanele futhi ephelele mayelana Indlela Ngemvume-Akhawunti Hotmail. Uma ungazange udale i-akhawunti yakho ye-Hotmail bese uchofoza lapha ukuze Dala i-akhawunti ye-Hotmail lokuqala. Hlola MyHR CVS Employee Ngemvume
Bhekani ngililalele izwi futhi walungiselela Process okuphelele Hotmail Izithombe futhi. Kufanele ulandele lolu Hotmail kabusha iphasiwedi ukucubungula ngokucophelela futhi une ukunikeza ulwazi kahle ngempumelelo alulame Hotmail yakho Iphasiwedi.
Uthola Hotmail Ngemvume Process Kulula kakhulu kulesi sihloko. Ngisebenzise ulimi silula ukudala lesi sihloko olwaziwa yiningi labantu kalula. Landela igxathu negxathu Umhlahlandlela esisheshayo futhi emva kokuqeda inqubo oyifakile wakho Hotmail Ibhokisi lokungenayo.
Dlula phezulu kuya phansi kwalesi sihloko futhi ukwazi ulwazi oluphelele Indlela Ngena ku-akhawunti Hotmail futhi utakule Hotmail Iphasiwedi. Une ukusebenzisa yakho Igama lomsebenzisi futhi Iphasiwedi ozitholile ngemuva kokuthi i-akhawunti yakho ukuze ngemvume yakho Ibhokisi lokungenayo Hotmail.
Hotmail Ngemvume Process | Isinyathelo by Isinyathelo Inqubo
Lookout ngezansi Ukukhuluma izinyathelo Hotmail Ngemvume. Landela izinyathelo njengoba kushiwo bese uqedela ngokuphumelelayo ukuze Ngena ngemvume ku-akhawunti ye-Hotmail.
Faka ku-Hotmail ngemvume portal esemthethweni: www.outlook.com.
Manje, chofoza ku “Ngena ngemvume” inkinobho ukungena ikhasi lokungena ngemvume.
Manje, faka imeyili, ifoni, noma i-Skype esikhaleni esinikeziwe bese ucindezela “Olandelayo”.
Manje, faka iphasiwedi yakho ngokucophelela esikhaleni esinikeziwe bese ucindezela “Olandelayo”.
Ekugcineni, ngemuva kokuqeda zonke izinyathelo ezingenhla uyongena ku-akhawunti yakho yakwa-Hotmail.
Hotmail Iphasiwedi yokutakula Process
Uma kwenzeka uma ukhohlwe iphasiwedi yakho bese ungakhathazeki, landela izinyathelo okukhulunywe ngezansi futhi iphasiwedi yakho ngeke zibuyiswe kalula.
Okokuqala, faka olusemthethweni Hotmail website chofoza lapha: www.outlook.com.
Manje, uchofoze Ngena ngemvume bese ufaka i-imeyili yakho, ifoni, noma i-Skype bese ucindezela “Olandelayo”.
Manje, ngemva kwalokho chofoza “Khohlwa iphasiwedi yami” inketho ukuvula Iphasiwedi inqubo yokutakula.
Manje, uzobona ikhasi uthi Phinda i-akhawunti yakho nge-id imeyili engakafakwa, cindezela “Olandelayo”.
Manje, lapha unayo ukungena ngekheli le-imeyili evela kuleli elilodwa ozama alulame iphasiwedi bese ufaka izinhlamvu ozibona esikhaleni esinikeziwe bese ucindezela “Olandelayo”.
Ngemva kwalokho, uzothola ikhodi phezu ikheli elahlukile le-imeyili olifakile, faka ikhodi bese ucindezela “Qinisekisa” inkinobho.
Manje, faka imininingwane yakho siqu ku efana Igama lokuqala, Isibongo, Usuku lokuzalwa, Izwe / Isifunda, Izwe / Indawo, futhi ikhodi yeposi bese ucindezela “Olandelayo”.
Manje, kuleli khasi lokuqala, faka amaphasiwedi uke wasebenzisa kule akhawunti, bese ukhetha ukuthi uke ukusebenzisa le ngezansi ukusho imikhiqizo Microsoft ne-akhawunti yakho. Futhi ekugcineni ukhetha “indawo” noma “Ayikho” yombuzo ukuthi “Wake wathenga nge okuthile Microsoft phambi” bese ucindezela “Olandelayo”.
Manje, esinyathelweni odlule, kufanele ufake Ikheli le-imeyili osanda Uthumele imeyili. Futhi ngqo kuncike imigqa wakho asanda wathumela ama-imeyili.
Ekugcineni, Ulwazi lakho sithunyelwe futhi kuzothatha cishe 24 amahora ubuyekeze ulwazi lakho okufakiwe.
Lesi sihloko imayelana Hotmail Ngemvume Process futhi Hotmail Iphasiwedi yokutakula Process. Ngenzé lesi sihloko ngalolu isinyathelo elula ngesinyathelo isitayela ukuqonda kalula. Kufanele nje landela izinyathelo bese uqedela inqubo ngempumelelo Ngena ngemvume ku-akhawunti ye-Hotmail.
Uma unanoma yimiphi imibuzo noma ufuna ukunikeza impendulo yakho mayelana lesi sihloko ke lona usebenzisa ngezansi Ukukhuluma amazwana ebhokisini. Futhi uthole update njalo website yethu. Godu hlola Umhlahlandlela gmail i gmail ngemvume ohlukile
Filed Under: Ngena ngemvume Tagged With: Hotmail Izithombe, Indlela Ngemvume-Akhawunti Hotmail, Ngena ngemvume ukuze Hotmail akhawunti, Ngena ngemvume ku-akhawunti ye-Hotmail